नाकामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
स्वास्थ्यकर्मी आफैं संक्रमित
माघ २, २०७८ रुपा गहतराज
नेपालगन्ज — भारतबाट फर्केका यात्रुको कोरोना जाँचमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुन पुगेका छन् । नाकामै कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि खटिएका १७ जना स्वास्थ्यकर्मीमा ९ जना संक्रमित भएका छन् । हेल्थ डेस्कमै खटिएका कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन थालेपछि नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन थालेको छ ।
नाकाको हेल्थ डेस्कका खटिएका चिरिञ्जवी ज्ञवालीले सेवा प्रदान गर्न समस्या भएको बताए । 'जनशक्ति थप गर्नका लागि ताकेता गरीरहेका छौं,' उनले भने , 'थोरै जनशक्तिमा सबैको परीक्षण सम्भव हुँदैन ।'
पछिल्लो केही दिनयता नेपालगन्जको जमुनाह नाकाबाट घर फर्किने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । उनीहरु फर्किएसFगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ । नाकामा पुस १९ गते देखि ३० गते सम्म ३३६ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले हेल्थ डेस्कमा कार्यरत ल्याबका कर्मचारी र पारामेडिक्सलाई कोरोना पुष्टि भएको बताए । संक्रमित सबै जना स्वास्थ्यकर्मीमा सामान्य रुघाखोकी देखिएको छ ।
नाकामा १७ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको थियो । जो दुई सिफ्टमा ड्युटी गर्छन् । मास्क, एम्प्रोन लगाएर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी समेत कोरोनाको जोखिम छ । भीड व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सकस छ ।
भारतमा कोरोनामा भाइरसको संक्रमण तीव्र बनेसँगै रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपालीहरु घर फर्किन थालेका हुन् । भारतको दिल्ली, महाराष्ट्र, चण्डीगढ, हैदराबाद, चेन्नईबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना देखिएको छ ।
बाँकेमा शनिबार मात्र एकैदिन ८५ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले शनिबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार भेरी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा ४४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २८ जना व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
यस्तै, मेडिकल कलेजको ल्याबमा ३४ जनाको परीक्षण गर्दा १६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यसैगरी बागेश्वरी ल्याबमा २५ जनाको परीक्षण गर्दा ९ जनामा संक्रमण देखिएको केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले बताए । उनका अनुसार १ सय ३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यसमध्ये बाँकेका मात्रै २५ जना पुरुष र १४ जना महिला गरी ३९ जना संक्रमित रहेका छन् ।
प्रकाशित : माघ २, २०७८ १३:०१
अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने नास्टले 'गीत लेखन'को सूचना प्रकाशित गरेपछि आलोचना
काठमाडौँ — नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले अनुसन्धानको सट्टा गीत लेखनका लागि सूचना निकालेको भन्दै प्राज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । वैज्ञानिक संस्थामा खोज तथा अनुसन्धानका काम नगरी नास्ट गीत लेखनतिर लागेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आइतबार गोरखापत्रमा नास्टले नेपाली भाषामा ‘नास्ट गान’ तयार गर्न सूचना निकालेपछि प्राज्ञहरुले विरोध जनाएका हुन् । ६० शब्दको हुने उक्त गान तयार गर्नेलाई नास्टले ५० हजार रुपैयाँको पुरस्कार व्यवस्था गरेको छ ।
नास्टकी प्राज्ञ प्राडा. सानुदेवी जोशीले नास्ट मनोरञ्जन गर्ने संस्था नभएर अनुसन्धान गर्ने र नवप्रवर्द्धन गर्ने संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता काम गर्ने बेला नभएको बताइन् ।
‘गीत, संगीत, साहित्यका लागि ललितकला प्रतिष्ठान छ । नास्टको अहिले रिसर्च गर्ने समय हो कि गीत लेख्ने बेला हो ?,’ प्राडा जोशीको प्रश्न छ । उनले नास्टलाई अहिले नै गीत आवश्यकता नभएको बताइन् ।
यस्तै, नास्टका अर्का प्राज्ञ प्राडा. पारसनाथ यादवले नास्टले प्राथमिकता अनुसन्धानमा दिनुपर्ने बताए । नास्टमा हुने काम सबै विधि, विधान र वैज्ञानिक किसिमले हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अनुसन्धानमा प्राथमिकता नदिने अनि यस्ता कुराहरुमा नास्ट अल्झिन नहुने सुझाव उनले दिए ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेसका सिनियर साइन्टिस्ट डा. वसन्त गिरी नास्टले गर्नुपर्ने काम नदेखिएको तर यस्ता कार्यले गर्दा अन्य काम आझेलमा पर्ने बताउँछन् । नेशनल योङ एकेडेमी अफ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका डा. गिरी भन्छन्, ‘अहिले नास्टले गर्नुपर्ने काम देखिएका छैनन् । तर यस्ता काम नलाग्ने कार्यले अन्य काम ओझेलमा पर्छ ।’
त्रिविको व्यवहारिक विज्ञान तथ प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट)का पूर्वनिर्देशक एवं प्राडा. रामेश्वर अधिकारी नास्टको प्राथमिकता गीतमा नभएर विज्ञानमा हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘नास्टलाई अहिले ठूला–ठूला प्रयोगशाला आवश्यक छन् । संस्थाका लागि गीत पनि आवश्यक पर्छ । तर, अहिले प्रथमिकता गीतमा हैन, विज्ञानमा हुनुपर्छ ।’
यस्तै नस्टका सचिव डा. महेश अधिकारीले भने नास्टको आफ्नो छुट्टै गानको आवश्यकता भएको औंल्याए । उनले भने, ‘हरेक संस्थाको आफ्नो छुट्टै गान हुन्छ । नास्टमा गाउने गान छैन भन्ने भयो । आवश्यकता महसुस भएर निर्णय भएको हो ।’ नास्टका प्रवक्ता डा. सुरेशकुमार ढुंगेलले यो विषय प्रबद्धर्नात्मक भएकाले अन्यथा लिन नहुने प्रतिक्रिया दिए ।
तत्कालीन राजालाई खुशी पार्न सुरुवात गरिएको थियो गीत
रोनास्ट हुँदा राजालाई खुशी बनाउनका लागि ‘नास्ट गीत’ तयार पारिएको थियो । नास्टका अवकाश प्राप्त कर्मचारी प्रियदर्शन मानन्धरका अनुसार ४४/४५सालतिर नास्टको प्राज्ञसभामा राजा वीरेन्द्रको उपस्थित भएको बेला गीत गाइन्थ्यो ।
रोनास्टको कुलपति राजा हुने व्यवस्था थियो । त्यसबेला रोनास्टका कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठ संगीतकार भक्तराज आचार्य र गायिका कोइलीदेवीले रोनास्ट गीत गाउन आफूहरुलाई सिकाउन कार्यालयमा आउने गरेको मानन्धरले बताए ।
राजतन्त्र अन्त्यसँगै रोनास्टबाट नास्ट भएपछि पुरानो समयको गीत सुहाउँदो नभएपछि नयाँ गीत तयार गर्न खोजेको नास्टले जनाएको छ । हाल नास्टको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित : माघ २, २०७८ १२:५८
जिपको ठक्करले बालकको मृत्युपछि आफन्तद्वारा प्रदर्शन
बर्दियामा जिपको ठक्करबाट बालकको मृत्यु
मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न राप्रपा पाल्पाको माग
पाल्पामा मूल्यवृद्धिविरुद्ध आन्दोलन : ६ जना प्रहरी नियन्त्रणमा